တောင်မှတစ်မျှမျှတတပျော်ရွှင်အောင်မြင်သောမိသားစုများအတွက်ဖွစျနိုငျသူမ၏ခင်ပွန်းတစ်ဦးသစ္စာဖောက်အဖြစ်, မိန်းမသည်သူ၏မယားများအတွက်ဝမ်းနည်းဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် စိတ်ဖိစီးမှု တစ်ခုသာအနီးကပ်ဆွေမျိုးများ၏ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအမှန်တကယ်စိတ်ကျရောဂါသို့ကျရောက်သင်ယူဖို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးကလွဲရင်ယုတ်ညံ့၏တနျခိုးပေါ်မှာ။ သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့သစ္စာဖောက်ပြီးနောက်အသက်ရှင်ဖို့ဘယ်လို, သင်သည်ဤဆောင်းပါး၌နိုင်ပါလိမ့်မည်လေ့လာပါ။
သူမ၏ခင်ပွန်း၏သစ္စာဖောက်ပြီးနောက်ဘဝရှုပ်ထွေးအများကြီးရှိပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင်မျောက်မှလေးနှစ်ဆက်တိုက်တုံ့ပြန်မှုခြေလှမ်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိပါတယ်တွက်ချက်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏ကြာချိန်နှင့်တစ်ဦးချင်းအမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
1. "ဒါဟာငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်နိုင်ဘူး။ " ဒီအဆင့်မှာအမျိုးသမီးတစ်ဦးချစ်မြတ်နိုးခြင်းဖြင့်သစ္စာဖောက်များ၏အလွန်ဖြစ်နိုင်ခြေငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်အသည်းအသန်အိမ်ထောင်ဖက်ဘို့ဆင်ခြေရှာဖွေနေ။ သူတို့မှန်လျှင်စည်းကမ်းအတိုင်း, ပဋိပက္ခလျော့ကျကုန်သည်။ ဒီပြည်နယ်ထဲမှာ, အမျိုးသမီးကိုမဆိုပုံပြင်များကိုယုံကြည်ဖို့နဲ့အာရုံစူးစိုက်ဖောက်ပြန်၏သက်သေအထောက်အထားများကိုလျစ်လျူရှုလို့မရပါဘူးဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။
2. "ဘယ်လို! သင်သည်တတျနိုငျသ" ဒါမှမဟုတ်သူမ၏ခင်ပွန်းရဲ့ဖောက်ပြန်ပြီးနောက်စိတ်ကျရောဂါ။ ဒုတိယအဆင့်ကများသောအားဖြင့်လျှင်မြန်စွာရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။ အမြိုးသမီးတသည်၎င်း၏နောက်ဆုံးထင်ယောင်ထင်မှားရှုံးနှင့်အတော်လေးအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါသည်အခြေအနေကမှာကြည့်ဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ ခြောကျခြားဖွစျပွီးအမြားအပွားနှင့်သူ၏ပြိုင်ဘက် "ပေး" လိုဘဲ, အသစ္စာဖောက်ဖို့တွယ်ကပ်။ သို့သော်ဆန့်ကျင်အပေါ်အချို့သာငိုကြွေးအော်ဟစ်ခြင်းနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပေါ်ထဲမှာလှည့်။ ဤအခြေအနေ၌, ထိုလူသို့မဟုတ်သူ၏ဇနီးဝေဒနာတွေ, ဒါမှမဟုတ်တုံ့ပြန်ကြွေးကြော်။
3. "ရဲ့စကားပြောပါစေ။ " ဒီအဆင့်မှာမိန်းမသစ္စာဖောက်ပြီးနောက်သူမ၏ခင်ပွန်းယူဘယ်လိုထင်နှင့်မှာအားလုံးထိုသို့ပြုမှရှိမရှိ။ မရကြဘူး, အရင်ကဲ့သို့, တိုက်ရိုက် - ကဒီမှာ, ဒါမှမဟုတ်ခြစ်ရာကနေစတင်သို့မဟုတ်ခွဲထွက်ရန်:
မကြာခဏအမျိုးသမီးတွေရာဇသံကိုထား - ခင်ပွန်းတစ်ဦးအမြှောင်အရွက်သို့မဟုတ်ပစ်ဖြစ်စေ။ များသောအားဖြင့်လူတ "ကျနော်တို့မိသားစုကိုကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသင်အလိုရှိဘာလုပ်", သာ ပို. ပင်ရိုင်းစိုင်းသူ၏ဇနီးထံမှအဖြစ်ရှေ့တော်၌အသက်ရှင်ရန်ဆက်လက်အတိုင်းဤနားလည်နိုင်;
တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်အိမ်ထောင်ကိုကယ်တင်လိုသောအဆိုပါအိမ်ထောင်ဖက်သူနောက်ဆုံးတော့သူကဝေးရတဲ့ခဲ့ သိ. ရဲသောမျက်နှာဖြစ်လာပေမယ့်မိသားစုအတွက်ဖြစ်နေဆဲဘာဖြစ်လို့သောငါ၏ခင်ပွန်းဘို့နှစ်ဆ start ဖို့ကြိုးစား;
အခြို့သောမယားတို့ကိုအခြားလူအားဖြန့်ချိနေကြပါတယ် - သူသည်ပြေးအဲဒီမှာနထေိုငျဖို့ကြိုးစားပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 90% အတွက်စုံတွဲတစ်တွဲရှိသူ၏ဇနီးမှပြန်လာသောဖြစ်ပါတယ် ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်လအတွင်း;
သည်အခြားဇနီးချက်ချင်းနှစ်ခုတုံ့ပြန်မှုများ၏တဦးတည်းဖြစ်စေ, တစ်ဦးပွိုင့်ခြင်းဖြင့်ရှေ့ပြေးသစ္စာဖောက် - သူမ၏ခင်ပွန်းပြန်အနိုင်ရဆိုကြိုးပမ်းမှု, အခြားသူများအိမ်ထောင်ရေးချစ်ခြင်းမေတ္တာမဟုတ်ပါဘူး, သင်လုံခြုံစွာထွက်ခွာနိုင်ကြောင်းဆုံးဖြတ်။
4. "အားလုံးအတူတူပင်။ " ဤအဆင့်များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခြေအနေကအပြည့်အဝလက်ခံမှုဆိုလိုသညျ။ မယားဆက်ဆံရေးဖျက်ဆီးခံရပြီးပြန်လည်ကောင်းမွန်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှမညျဖွစျကွောငျးလကျခံဖို့ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ပြန်လာရန်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်လာသည်။
မယားမြားဖောက်ပြန်ပြီးနောက်သူမ၏ခင်ပွန်းကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားနေကြသည်။ သို့သျောလညျးပိုငျသညျဤအဘို့ကြိုးစားကြသည်, ထိုထက်ပိုသောသူတို့ကဤအခြေအနေကို၏မူဘောင်များနှင့်သို့သူတို့ကိုယ်သူတို့မောင်းနှင်နေကြသည် စိတ်ကျရောဂါ ။ ဆန့်ကျင်တွင်, ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သင်ကဘာဂရုမစိုက်ပါဘူးသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ် - ပိုမိုမြန်ဆန်သင်၏အသက်တာပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးကလက်ထပ်လူတဦးနဲ့လက်ထပ်မိန်းမနှင့်မေတ္တာထဲတွင်လဲ - အရိပ်လက္ခဏာ
ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့်ဒိန်ခဲနှင့်အတူ Pita ပေါင်မုန့်
သင့်ရဲ့နှာခေါင်းအပေါ် blackheads ဖယ်ရှားပစ်ရဘယ်လိုနေသလဲ?
Elvis Presley ဆီမှာဆိုရင်အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ထောပတ် - စာရွက်
အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ဖိနပ် running - မော်ဒယ်များကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနဲ့နေသော?
အရသာနှင့်မူရင်းချက်ပြုတ်နည်းများရိုးရှင်းသောနေ့စဉ်ဟင်းလျာများ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူ Couscous